काठमाण्डाैँबाट दिल्ली जाने मञ्जुश्री यातायातको लापरबाही, नेपाली यात्रुलाई कष्ट
बागलुङ । युनाइटेड नेपाल मञ्जुश्री यातायातले काठमाडौँबाट दिल्ली लैजान हिंडेका यात्रुलाई सुनाैलीमा लगेर भारतीय नम्बर प्लेटकाे आफ्नै कम्पनीकाे सेवाविहिन बस चढाई अलपत्र र कष्टकर बनाएको छ।
नेपाल मञ्जुश्री कम्पनीबाट सञ्चालित बायस ट्राभल्स १३६२ नम्बरको बसमा चढेर भारतको दिल्ली हिडेका जना यात्रुले अलपत्र र कष्टकर यात्रा गर्न वाध्य बनेका छन् । भारत दिल्लीका लागि नेपालबाट छुटेको उक्त बस सुनौली बोर्डरसम्म गएको थियो । अधिकांश यात्रुले ई–टिकट र केही यात्रुले टिकट लिएर यात्रा गरेका ३८ जना यात्रुलाई सुनौली बोर्डरबाट रिक्सामा पारी तारेर चालक र सह–चालक भागेपछि यात्रुहरुले सुनौली बोर्डरमा तीन घण्टा ताताे घाम खाएर कुर्नुपरेको थियो । चार घण्टाको पर्खाईपछि भारतबाट आएको GJ.03.GV. 4474 नम्बरको बसमा चढेपछि यात्रु कष्टकर बनेका हुन् । चार घण्टापछि फाेन लागेर चालक आएपछि उक्त बस दिल्ली जाने भन्दै अगाडि बढेता पनि गाठिमा हावा आउने ठाउँ, एसी, फ्यान केही नहुँदा सबै यात्रु कष्टकर बनेका हुन् ।
काठमाण्डौँ–दिल्ली भनिएपनि सुनौलीबाट चालक र सहचालका भागेपछि यात्रुहरु आक्रोसित बनेका थिए । चालक अमृत खड्का रहेको उक्त कम्पनीको सुनाैलीसम्म सुविधा सम्पन्न बस भएता पनि भारतीय नम्बर प्लेटकाे बसमा झ्याल, पंखा वा एसी केही पनि नभएको र भाडा समेत मनलाग्दो लिएको यात्रु गोविन्द हुमागाईंले बताउनु भयाे ।
उक्त बसमा काठकाडौँको भाडा – रहेकाेले किन फरक-फरक भएकाे भन्ने सबै यात्रुहरु प्रश्न छ। ‘एसी सेवा भनेर महंगो भाडा तिर्‍यो, तर बसमा झ्याल समेत थिएन्,” यात्रु हुमागाईले भने, “गाडीमा अत्यधिक गर्मीले पसिनै पसिना हुनुका साथै यात्रामा सवार महिला, बालबालिका, वृद्धसमेतले यात्रा अवधिभर कष्टकर यात्रा गर्न वाध्य बने ।’
उक्त बसले यात्रुहरुको भाडा समेत समान नभएर प्रति यात्रु ३७ सय देखि ६ हजार समेत लिएर मनपरी गरेकाे भन्दै यात्रु डा. असिम शाहनीले बताउनु भयाे । नेपाल भारत बिच पारवाहन संझौता भए अनुसार २०७३ असार ९ गते काठमाडौं–नयाँ दिल्लीका लागि दुईवटा बस सुचारु भएका थिए । यात्रुहरुलाई मञ्जुश्रीले दिएकाे दुख: र कष्टकर यात्राका लागि कारवाहीकाे माग गरेका छन् । मञ्जुश्री बस यातायातमा यति समस्या दिने कुरामा सरकार र सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने नागरिक सञ्जालका अभियन्ता सीताराम थापा बताउनु भयाे। भविष्यमा मञ्जुश्री यातायातबाट दिल्ली जान सबै यात्रु सचेत भएर मात्र चढ्नुपर्ने नागरिक समाजकाे बुझाई रहेकाे छ ।
पछिल्लाे - कम्युनिस्ट एकतापछिका संशय